Zokuhamba eqhweni "Yamaha Viking 540 3": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nezici
Emakethe kwase imodeli wesine snowmobile ethandwa "amaViking" kusukela "Yamaha", kodwa kuze kube manje-ke akazange uthandwa kangaka, njengoba kwaba esasisandulele. Uma ungazi ke "Yamaha Viking 540 3" Ukucaciswa umxhwele ngokuphelele wonke umuntu isikhathi eside. Kuyinto lokhu imodeli futhi kuzoqhubeka, ngoba kudingeka siyinake ngokukhethekile.
Endabeni snowmobile "Yamaha Viking 540 3" Ukucaciswa neqhaza ekunqumeni, ngoba ezingeni emangalisayo okusezingeni eliphezulu uma siqhathanisa nabanye abakhiqizi kanye tinkhulumo. Nokho, ngisho umbono jikelele, uyaphuma lolu hlobo ezokuthutha muhle kakhulu futhi ngisho yesiteleka.
Into yokuqala okumele okungukuthi sobala lapho usebenzisa eqhweni, kodwa ke okungukuthi isibungu, lapho kufinyelelwa an amazing umphumela. Okokuqala, kakhulu anda umthamo ubelokhu bekade lwentando ezithuthuthwini "amaViking". Okwesibili, futhi-ke kwandisa permeability - manje ungakwazi ngokuphepha uhambe ngoba eqhweni enkulu ngisho iqhwa ejulile. Ngaphezu kwalokho, "Yamaha" injini futhi bekulokhu umthombo yokuziqhenya - futhi kulesi sikhathi akazange ukudanisa. Kungaba ukuthuthukisa ngesivinini umxhwele futhi ngokushesha thatha nomaphi lapho ufuna.
Sicela wazi ukuthi ezinye nice izici, ezifana elandayo futhi ukunciphisa igiya futhi kagesi isiqalo ukuthi ezinye ezithuthuthwini wena kuzodingeka ngithenge eceleni, kakade zazihlanganisa ebhokisini. Lokhu isihlibhi libhekwa utilitarian kanye kuphela ngaphakathi kulesi sigaba, lokukhulunywa ngako kulendzaba unawo amandla anjalo umxhwele ukusebenza izinga ehlanganisa nokuya nomaphi. Kodwa isikhathi sesifikile ukuba babheke kabanzi yokuthi kangaka Udumo snowmobile "Yamaha Viking 540 3" - izici lobuchwepheshe ke anazo.
Into ebaluleke kakhulu snowmobile - injini, futhi lolu daba kuqinisekiswa umholi "Yamaha Viking 540 3", izici lobuchwepheshe lokhu snowmobile kusishiya sibambe ongezansi, futhi injini yayo ingenye enamandla kakhulu - ngisho ke ogibele ezithuthuthwini nezinye brand. Ngaphezu kwalokho, kuba omunye imininingwane zazingazange zishintshwe lwakamuv imodeli lesine "amaViking". Engine umthamo 535 cubic metres, namandla - kakhulu ngendlela amahhashi amane nesithupha. Lokhu kunikeza throughput Amazing, kanye ithuba ukuthuthukisa isivinini kunalokho umxhwele kuzo zonke izimo. Imininingwane Yamaha VK540 III Viking, njengoba ubona, kungaba akumangalisi muntu ngoba injini ezinjalo kuyokusiza ukuba uthole ngaphandle nenkinga kuphi.
Eyesibili isici esibaluleke kunazo zonke snowmobile - Yebo, isibungu. Imininingwane Yamaha izithuthuthu ngokuvamile kakhulu kunqunywa zabo ijubane isondo, kuyilapho eqhweni, ngokulandelana - isibungu yabo. Endabeni imodeli ilandelela ubude cishe ezine amamitha ne ubude isihlibhi cishe ezintathu amamitha. Futhi uzinake kuyinto ububanzi umxhwele amathrekhi, okuyinto ngaphezu kwesigamu nje imitha - lokhu ububanzi inikeza kakhulu umthwalo umthamo kanye flotation ezinhle kunoma iyiphi iqhwa. Ungakhohlwa mayelana kumila ski, njengoba ithrekhi futhi Ukushushuluza ezibhekwa ephelele - efana izimoto izithuthuthu ukushayela namasondo enophephela. ski usayizi resort cishe imitha, nakho kunomthelela omuhle ukuphumelela kwalesi imodeli. Zokuhamba eqhweni Yamaha Viking III 540, okuyinto Izibuyekezo akhayo kakhulu, ufaneleke ngokugcwele imali oyosichitha kukho.
I last isici esibalulekile lobuchwepheshe the snowmobile - umthamo yayo. Njengoba sekushiwo ngenhla, nje bamangale - ngesikhathi umzimba isisindo engaphansi kuka-300 kilograms, yena ikani ngaphandle inkinga sife ngaphezulu nesisindo ezahlukene ijubane 60 amakhilomitha ngehora. Qaphela ukuthi ungakwazi futhi uvikelekile ku umthwalo isisindo nakakhulu - kuyokusiza ukudonsela ukunciphisa igiya. Umphumela snowmobile cishe ephelele, okuyinto kufanele wathola yayo udumo ezweni futhi waqinisekisa ngokuphindaphindiwe ukuthi ekahle yimuphi umsebenzi onikwe yona ngokwalesi.
Bentley Bentayga - edume imoto off-road nge ingaphakathi zikanokusho
SUV, Suv crossover: imoto Russian umkhakha nemoto yakhe engu- okusezingeni eliphezulu
Rover "Makar": ukubuyekezwa, izincazelo, imininingwane, amanani
"Yohlobo lweToyota Hilux": Umlando kanye nencazelo imodeli
A-44 Tank "Merkava" isampula 1941
Njengoba indawo njalo olusha kanye okuqukethwe okusha?
Cardiomagnil - yokusetshenziswa
Kuhle itiye izikhwama. Black futhi green tea: simo
"Antiangin" (spray): yokusetshenziswa, ngempela
Kanjani kunjalo yokudlulisa?
Iphunga omuncu izithukuthuku. Izimbangela iphunga
Ihhotela Sunshine Park 3 * (Lloret de Mar / Spain): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Imincintiswano Comic for abafundi basesikoleni esiphakeme e ibhola ekwindla
"A kancane": ingabe ukupela kanjani leli gama (ngokwehlukana noma hyphenated)?
Indlela yokwakha isicelo "VKontakte" - kusukela ithiyori ukuzijayeza
Amathiphu ekuxhumaniseni i-PS3 ku-Inthanethi
Umsebenzi Audit: essence eziyisisekelo umehluko wemisindo nemiqondo yamagama